पोखरामा को अगाडी ? (यस्तो छ नतिजा) – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
पोखरामा को अगाडी ? (यस्तो छ नतिजा)
प्रकाशित: २०७४ जेठ ५ गते ८:२४
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा हालसम्म एक चौंथाई मतगणना सकिएको छ । १ लाख २५ हजार ९ सय ३२ मत खसेकोमा ११ वडाको ३१ हजार ३ सय ७० मत गनिसकिएको छ । यसबाहेक १२, १३ र १४ नम्बर वडाको मतगणना पनि भैरहेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार हालसम्म २५ प्रतिशत हाराहारीमा मतगणना भैसकेको छ । प्राप्त नतिजालाई मूल्यांकन गर्दा काँग्रेस र एमाले कसैले पनि अपेक्षाकृत नतिजा निकाल्न सकेका छैनन् । काँग्रेसका गढ भनिएका वडाहरुमा नजानिँदो हिसावले एमाले हावी भएको छ भने एमालेको पकड भएका वडाहरुमा पनि काँग्रेसको उपस्थिती राम्रो छ ।
मिश्रित नतिजाका कारण कुन पार्टीले जित्छ भन्ने अनुमान लाउन उस्तै कठिन छ । हालसम्म नेपाली काँग्रेसले ७ वडा जितेको छ भने एमालेले ४ वडा जितेको छ । गणना भएका वडामध्ये पाँचवटामा कांग्रेसले प्यानल जितेको छ भने तीन वडामा एमालेले प्यानल जितेको छ । अन्य ३ वटा वडामा मिश्रित परिणाम आएको छ । नेपाली कांग्रेसले वडा नम्बर २, ३, ४, ९ र १० नम्बर वडामा प्यानल जितेको हो भने १, ५ र ७ मा एमालेले प्यानल जितेको छ । एमालेको गढ हो ६ नम्बर वडा । यद्यपी यसपालीको स्थानीय चुनावमा वडाध्यक्ष काँग्रेसको पोल्टामा प¥यो । बाँकी सबै सदस्य एमालेले जितेको छ । काँग्रेसको पकड मानिएको ८ नम्बर वडामा वडाध्यक्ष सहित तीन सदस्य एमालेले जित्दा काँग्रेसले मुश्किलले दुई खुला सदस्य मात्रै जोगाउन सक्यो । ११ नम्बर वडामा वडाध्यक्ष सहित ४ वडा काँग्रेसले जित्दा एमालेले खुला सदस्य जितेको छ ।
११ नम्बर वडाको अन्तिम मत गणना आउँदा महानगर प्रमुख र उपप्रमुखमा हालसम्म नेकपा एमालेका उम्मेदवार अगाडी छन् । अन्तिम परिणाम आएका ११ वडामा एमाले उम्मेदवार मान बहादुर जिसीले काँग्रेस उम्मेदवार रामजी कुवँरलाई १ सय ७१ मतले पछाडी पारेका छन् । जिसीको १३ हजार ३ सय ९४ मत आउँदा कुवँरको १३ हजार २ सय २३ मत छ । उपप्रमुखमा एमाले उम्मेदवार मञ्जुदेवी गुरुङले काँग्रेस उम्मेदवार सरस्वती गुरुङलाई ६ सय ९३ मतले पछि पारेकी छिन् । मञ्जुले १२ हजार ७ सय २३ मत पाउँदा सरस्वतिले १२ हजार ३० मत पाएकी छिन् ।
वडा नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले
रामजी कुवँर सरस्वती गुरुङ मान ब जिसी मञ्जु गुरुङ
१ ८३१ ८४६ १०६५ १०५४
२ ८२८ ७५९ ६८० ६१७
३ ९२७ ८८३ ७५५ ६५०
४ ८७२ ६६३ ५७४ ४८६
५ ११६८ १०२३ १८२३ १७८०
६ १६७६ १११८ १२५३ १३४९
७ १०२८ ९३४ १३७३ १३५२
८ १६३८ १५७२ १८४० १८०१
९ १३०३ ११३५ १०४९ ९६८
१० १२३८ १३६८ १२५९ ११५५
११ १७१४ १७२९ १७२३ १५११
जम्मा १३२२३ १२०३० १३३९४ १२७२३